FITAIZANA ALIKA KELY 4 VOLANA (17 HERINANDRO) SPENCER THE PIT BULL - ALIKA
Fitaizana alika kely 4 volana (17 herinandro) Spencer the Pit Bull
Andro iray amin'ny fiainana miaraka amin'i Spencer the American Pit Bull Terrier puppy. Herinandro fahavalo an'i Spencer - 17 herinandro, 38 kilao, 17 3/4 santimetatra avy amin'ny tany ka hatrany amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka (malazo).
Spence dia manohy manao tsara amin'ny famakiana trano. Mbola mifoha amin'ny 7:00 maraina izy, matetika aloha, isaky ny maraina. Rehefa sokafana ny varavarana vata dia mandeha miankavanana eo am-baravarana izy, dia mivoaka ary manao ny asany. Mandritra ny andro dia tazominay tsara izy ary avelantsika any ivelany matetika handeha ho any amin'ny trano fidiovana. Mandehandeha eo am-baravarana im-betsaka isan'andro i Spence ary nosokafanay ary navoakanay nivoaka izy. Entinay mivoaka avy hatrany koa izy rehefa avy nifoha torimaso izy, avy hatrany rehefa avy nihinana izy ary raha efa elaela izay vao lasa izy. Raha vantany vao hitako izy manomboka manofoka manodidina ny gorodona dia mivoaka izy.
Tapa-bolana lasa izay taorian'ny nanaovan'i Spencer fanafody voalohany ho an'ny kankana. Fotoana izao ho an'ny doka fanindroany. Ilay zaza dia nihinana irery ny ankamaroan'ny pilina azo tsakoina irery, saingy toa tsy naniry ny sombin-javatra kely farany izy. Napetrako tao am-paosin'ny pilina alika ireto sombiny farany ireto ary nohaniny avy hatrany.
Izahay dia mitondra an'i Spencer amin'ny dia mankany amin'ny tanànan'ny Filadelfia. Miresaka momba ny fiarahamonina tsara: palma jack, olona, ​​fiara, tandroka, kiririoka, tabataba sy hetsika amin'ny lafiny rehetra.
Mijanona ao amin'ny mpivarotra sakafo izahay hisakafo atoandro. Spence, manantena aho fa tsy mihinana zavatra tsy tokony hohaninao eo ambaniny ianao.
Aorian'ny sakafo atoandro dia manapa-kevitra ny hitondra an'i Spencer sy Bruno amin'ny mitaingina soavaly izahay. Samy tsy torana amin'ny soavaly na ny kalesy izy roa. Mipetraka eo amin'ny seza i Spencer ka afaka mahita izy ary mipetraka eo amin'ny tany i Bruno.
Spence manamarina ny hetsika rehetra lalovantsika.
Imbetsaka isika no maheno ny olona miteny hoe: 'Aw, jereo, misy alika kely ao anaty kalesy!'
Spencer mankafy ilay dia
Izy dia zazakely be fitiavana izay mifamatotra amin'ny olombelona, ​​ireo fantany ary ireo tsy fantany. Tiany daholo ny olona.
Heveriko fa tian'izy ireo izy! Avy eo ankavia sy havanana: voatavo, Spencer ary Blizzard.
Ilay mpanidina manidina
Betsaka ny lalitra manidina manodidina ny trano izay miantsona amin'ireo alika ary manaikitra azy ireo. Tonga tany Bruno the Boxer izy ireo raha mbola natory natory izy ary hihodina hihinana azy ireo izy. Miadana loatra isaky ny mandeha, mazava ho azy. Nentiko nivoaka ilay mpanidina manidina mba hanampy azy hivoaka ary diso nampitahotra ilay fantatrao avy tamin'i Spencer aho rehefa nanandrana naka lalitra izay niantsona tsy lavitra azy loatra. Natahotra tampoka ilay mpanidina manidina i Spencer. Inona no hatao, inona no hatao. Tsy tiako ny hatahoran'ny alika ny zava-drehetra izay tsy misy fomba fiaina intsony. Nanapa-kevitra ny hanova azy io ho lalao izahay. Raha tsy niresaka taminy dia nanomboka nampiasa ny swatter fly hamelezana ny baoliny i Sara. Tsy dia natoky tena loatra i Spencer tamin'ny voalohany fa naka fanahy fotsiny ny baolina. Hadinony daholo fa ny scatter dia zavatra mampatahotra ary nanomboka nampifandray azy tamin'ny lalao baolina.
Nentinay niaraka tamin'ny dia nankany amin'ny Hershey Park ireo alika. Ny alika dia tsy mahazo miditra ao amin'ny valan-javaboary, saingy afaka nandeha an-tongotra nanodidina ny ivelan'ny valan-javaboary. Ny valan-javaboary dia manolotra kennel misy rivotra izay azonao itehirizana ny alikanao mandritra ny andro, na izany aza dia nanana ny RV izahay ary tsy nila nampiasa ilay serivisy. Niverina tany amin'ny RV aho ary nandehandeha imbetsaka nandritra ny andro.
I Spencer sy Bruno dia nandre olona nikiakiaka tamin'ny diany. Avia zazalahy, mihodina ary jereo ny fakantsary.
Tsara kokoa izany. Mitsiky tsara. Nandehandeha tany ivelan'ny valan-javaboary alika akaikin'ny roller coaster aho. Teo i Bruno, nanao an'izany ary nandeha foana fotsiny rehefa tonga ilay mpiantsoantso. Tsy dia natoky tena loatra i Spencer tamin'ny voalohany, nibanjina ny masony, nefa vetivety dia zatra ilay tabataba ihany koa.
Nandeha an-tongotra lavitra ny maraina talohan'ny nialanay nankany amin'ny valan-javaboary, nijanona an-tongotra teny an-dalana ho any amin'ny valan-javaboary ary nandehandeha lava be teo amin'ilay valan-javaboary no mitazona ny alika toy izao raha teo ivelan'ny RV izahay. I Spencer dia lehibe loatra izao ka tsy afaka manidy ny varavaran'ny boaty izay nentintsika ary izay lehibe kokoa dia tsy tafiditra tamin'ny varavaran'ny RV. I Spencer dia mbola tia matory ao anatin'io miaraka amin'ny loha mihantona ka nentinay ihany ihany.
Tamin'ny faran'ny alina dia nipetraka tamin'ny ambaratonga niaraka tamin'ny alika teo ivelan'ny fidirana aho, niandry ny ankizy rehefa nivoaka avy tao amin'ny valan-javaboary ny olona. Vondron'olona marobe no tonga nanotrona an'i Bruno sy Spencer. Ny alika dia nandany ny sainy. Samy tia ankizy kely izy ireo. Raha vantany vao tsy fantatry ny olona Bruno fa manomboka mametaka azy ny lelany dia manomboka milelaka fahazarana iriko fa tsy nanana izy, fa lick manesika izany ka tsy zavatra mahatsiravina, lena fotsiny.
Bruno! Tsy fantatro akory ny fomba nahaizanao nampiditra ny vatanao tao anatin'io boaty io, mainka moa fa hitodika ianao dia hiatrika ny eo aloha indray. Zanaka adala ianao.
Taty aoriana, rehefa tonga avy tany amin'ny valan-javaboary izahay dia efa hatory izao ary nandidy an'i Spencer aho hidina ao anaty vatany mandritra ny alina. 'Cage.' Silly Bruno dia niara-nandeha tamin'i Spencer nankany an-dakozia ary efa hiditra ao anaty vata. Nosakanako tamin'ny fihinanam-bera izy rehefa nandalo izy. Tsy te hiteny aho hoe 'Tsia' na i Spencer dia mety nieritreritra fa niresaka taminy aho. Bruno sakaiza, mihainoa. Ankizilahy lehibe ianao izao ary tsy mila mihidy anaty vata amin'ny alina. Ny vata dia ho an'ny zandrinao lahy.
Tsy azoko antoka akory hoe inona izany, fa mahatsapa taolana taloha izy io. Manantena aho fa tsy karazana poop io. Na izany na tsy izany dia tsy tokony ho nohanin'ity alika kely ity.
Um, Spence. Tsy azoko antoka akory hoe oviana ianao no nanao an'io. Henoy izany, ny bandy UPS dia tsy mitondra boaty baoritra mba hitsakitsahanao fotsiny. Oh, ary hitanao io taolana eo am-pandrianao io? Mila milaza bebe kokoa ve aho?
Sahona maty iray hafa. Oadray, Spencer. Heveriko fa mikasika sahona maty bebe kokoa aho hatramin'ny nanangananao anao noho ny nataoko tamin'ny fiainako manontolo. Omeo ahy izany. Gross!
Hmmm, izao ny pup dia manana ny hevitra mety. Mamaky taolana izy. Na izany aza, ny kaosiko ambanin'ny tongony ary fantatro fa tsy napetrako teo amin'ny fandriana alika izany. Tao anaty bootako io.
Aza avela hamitaka anao izany endrika tsy manan-tsiny izany. Mahita an'io bazy io eo ambaniny? Vao avy nesoriny avy tao amin'ilay kiraro io kiraro io segondra vitsy talohan'ny nakana ity sary ity. 'Hey!' nilatsaka tamin'ny tany izy toa tsy tonga tao an-tsainy mihitsy ilay eritreritra. Iza aho? Mahafatifaty loatra aho ka tsy hanao ratsy.
Ary indray. Nanana an'io bazy io teo am-bavany izy. Raha vantany vao niteny aho 'Hey!' nandry haingana izy dia nomeny ahy izany tarehy izany. Ratsy loatra ny porofo marina eo ambaniny. Tsy maintsy tiany ny fofon'ny tongotra. Tongotra, poop ary sahona maty. Misy lafiny mazava amin'ny zava-drehetra - farafaharatsiny mba tsy variana amin'ny vody sigara izy.
Isan'andro amin'ny fotoana fisakafoanana alohan'ny hametrahan'i Sara ny lovia fihinan'i Spencer dia asainy mipetraka izy ary mangataka ny paokony. Spence mitazona ny paokony eny amin'ny rivotra nefa tsy mikasika na inona na inona ary i Sarah kosa mametraka ny lovia hohaniny. Tiany ihany koa ny maka ny kilalaony, mangataka ny paokony ary rehefa manainga izy dia natolony azy.
Toa nampianatra an'i Spencer izany, amin'ny fomba fifandraisanao amin'ny zavatra tianao. Kilalao vitsivitsy an'i Spencer no tao amin'ny kabinetra satria kilalao mila fanaraha-maso izy ireo rehefa lalaovina noho ny vavany mahery vaika an'i Bruno. Azony atao ny mitsako azy ireo minitra vitsy raha avelako izy. Nahita ireo kilalao i Spencer, dia nankeo amin'ny kabinetra, nipetraka tamim-pahatoniana ary mbola nijery ireo kilalao nampiakatra ny paosiny teny amin'ny rivotra.
Taty aoriana tamin'io alina io ihany dia somary taorian'ny sakafo fisakafoanana. Nandeha nankany amin'ilay toerana nihinanany izy, nipetraka tamim-pahatoniana ary nitazona ny paokony teny amin'ny rivotra. Nampahatsiahy ahy izany mba hilaza amin'i Sara aho mba hanome sakafo ireo alika. Niandry am-pitoniana izy teo am-panomanana ny sakafony ary mazava ho azy fa nasain'i Sara nampiakatra ny paosiny tamin'ny rivotra izy vao nihinana.
Satria fantany izao fa ny paw amin'ny rivotra dia midika hoe te hanana izany izy, dia niresaka tamin'i Sara aho ary nilaza taminy fa alao ilay tetika 'paw' mijanona fotsiny mitazona azy eny amin'ny habakabaka tsy misy fifandraisana. Halako izy hanomboka hanolana ny olona sy ny zavatra rehefa zavatra tadiaviny. Izaho koa mila mahazo antoka fa mijanona ho tony sy manolo-tena momba an'io izy ary manao tetika fanampiny amin'ny fe-potoako raha tokony hahazo izay angatahiny izy. Ny zavatra iray dia azo antoka, izy dia zaza marani-tsaina iray vao efatra volana.
Spencer dia tsy manana fotoana hiakarana ambony ambany amin'ny sidina feno matetika. Nandritra ny faran'ny herinandro, na izany aza, tao an-trano izahay ary nisy tohatra nila naleha sy nidina izy. Tamin'ny voalohany dia nijery azy ireo fotsiny izy ary tsy nanandrana akory. Noraisiko izy ary nentiko mandra-pahatongan'ny ambaratonga roa sisa ary napetrako izy. Nihanika azy ireo i Spencer ary faly rehefa tonga tany an-tampony. Nivoaka tamin'ny varavarana aoriana izahay izay nisy tohatra dimy teo amin'ny lavarangana. Nidina tany amin'ireo tsy nanana olana i Spencer. Ny fotoana manaraka nidirantsika tao an-trano dia nanana ny sakana tamin'ny sidina feno nanidina teo alohany indray i Spencer. Tsy te hianika azy ireo izy. Noraisiko izy ary nasiako dingana efatra avy eo ambony. Nihanika azy ireo izy ary faly indray rehefa tonga tany an-tampony. Tamin'io andro io ihany rehefa nivoaka sy niverina tany Spencer izahay dia nijery ireo dingana feno ary nitady izany. Nihanika ny lalana rehetra izy irery! Arakaraka ny ahatongavany eo an-tampony, dia vao mainka mihodina ny rambony. Rehefa tonga tany an-tampony dia nandeha tsara ny rambony.
Fitaizana alika kely: Spencer the Pit Bull
Fitaizana alika kely: Mia the American Bully (Bully Pit)
Euthanasia mandatory amin'ny Terera Amerikanina Pit Bull Terrier
inona ny alika jindo
fifangaroan'ny laboety sôkôlà
alika malamute husky wolf mix
jack russell shih tzu vidiny
alika kely shih tzu sy yorkie